Hot news:Wasiirka Warfaafinta Eng yariisow oo fashiliyey cidda ku qasabtay farmaajo in uu dagaal iclaamiyo | Xaqiiqonews
Hot news:Wasiirka Warfaafinta Eng yariisow oo fashiliyey cidda ku qasabtay farmaajo in uu dagaal iclaamiyo
Wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaciyay ciddii ka danbeysay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqo xaalad dagaal.
Sida uu maanta qoray Wargeyska Guardian ee dalka Ingiriiska, ku dhawaaqista xaaladda dagaal ee madaxweyne Farmaajo si lama filaan ugu dhawaqay 6-dii April ee sanadkan ay ka danbeysay kadib wadahadal dhex maray Mareykanka iyo Soomaaliya.
Go’aanka ku dhawaaqista xaaladda dagaal ee ka dhanka ah Alshabaab ayaa la qaatay kadib wadahadal dhex maray labada dowladooda. “Waxa jiray xiriiro dhow oo labada dowladood ay leeyihiin, madaxweynaheena ayaana ku dhawaaqay xaalad dagaal” ayaa laga soo xigtay wasiirka Warfaafinta xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Cumar Yariisow.
Go’aanka uu ku dhawaaqay Madaxweyne Farmaajo ee dagaalka Alshabaab ayaa ka danbeeyay markii madaxweynaha Mareykanka uu Soomaaliya u aqoonsaday AAG DAGAAL, isla markaana fududeeyay xayiraaddii ciidamada Mareykanka ka saarneyd inay howlgallo culus ka geystaan Soomaaliya.